Window မန်နေဂျာများ - GNU / Linux အတွက်ဂရပ်ဖစ်အသုံးပြုသူမျက်နှာပြင်များ Linux မှ
အစအ ဦး ကတည်းက GNU / Linux များ၏အသုံးပြုမှုနှင့်မတူကွဲပြားမှု ဂရပ်ဖစ်အသုံးပြုသူမျက်နှာပြင်များ (GUI) ရရှိနိုင်ကြီးထွားလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်သုံးစွဲသူများအကြားပြိုင်ဆိုင်မှုများပြားလာသည်။ အတွေ့အကြုံအသစ်များနှင့်အတွေ့အကြုံများရှိပြီး၎င်းသည်ရှိပြီးသားရွေးချယ်မှုများအနက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
သို့သော်ရရှိနိုင်သောလက်ရှိရွေးချယ်စရာများ GNU / Linux အတွက် GUIဆိုလိုသည်မှာ Window မန်နေဂျာများ (Windows ကိုမန်နေဂျာ - WM, အင်္ဂလိပ်လိုလူကြိုက်အများဆုံးသို့မဟုတ်လူသိများတဲ့, သူတို့ကများသောအားဖြင့်လူသိများပြီးပြည့်စုံသောအတွင်းပေါင်းစည်းလာ Desktop ပတ် ၀ န်းကျင် (Desktop ပတ် ၀ န်းကျင် - DE, အင်္ဂလိပ်လို) အခြားအများအပြားကဲ့သို့ကောင်းသော၊ သို့သော်လူသိနည်းလွန်းသောသို့မဟုတ်အသုံးပြုမှုနည်းနေသော်လည်းများသောအားဖြင့်သီးခြားရပ်တည်နိုင်သည် Desktop ပတ် ၀ န်းကျင် တိကျတဲ့။
ကျွန်တော်တို့ကိုတစ် ဦး အကြား, ထိုသတိရကြစို့ Desktop ပတ် ၀ န်းကျင် နှင့် Window Manager တစ် ဦး အကြောင်းပြောနေတာသည့်အခါအလွန်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းကွဲပြားခြားနားမှုရှိပါတယ် GNU / Linux လည်ပတ်ရေးစနစ်.
ပထမ ဦး စွာတည်ရှိခြင်းကိုမီးမောင်းထိုးပြသင့်သည် X Window System (X ၀ င်းဒိုး, အင်္ဂလိပ်လို) ၎င်းကိုဖန်သားပြင်ပေါ်တွင်ဂရပ်ဖစ်ပုံဆွဲရန်ခွင့်ပြုသည့်အခြေခံဟုသတ်မှတ်သည်။ အဖြစ် X ၀ င်းဒိုး ကီးဘုတ်နှင့်မောက်စ်တို့နှင့်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုနှင့်ပြတင်းပေါက်များအားဆွဲဆောင်နိုင်သည့်အထောက်အပံ့ကိုထောက်ပံ့ပေးသည်။ ပြီးတော့ဒီအရာအားလုံးကိုမည်သည့်ဂရပ်ဖစ် desktop အတွက်မဆိုလိုအပ်သည်။
ဤအရာကိုစိတ်ထဲ ထား၍ ၎င်းသည်၎င်းသည်ဖြစ်ကြောင်းပိုမိုနားလည်နိုင်သည် Window manager နှင့် Desktop ပတ် ၀ န်းကျင်.
2 Desktop ပတ် ၀ န်းကျင်
3 Desktop Environments နှင့်နှိုင်းယှဉ်။ Window မန်နေဂျာများ
3.1 သီးခြား Desktop Environment တစ်ခုနှင့်သက်ဆိုင်သည်
3.2 သတ်သတ်မှတ်မှတ် Desktop ပတ်ဝန်းကျင်၏လွတ်လပ်သော
ဒါဟာပြတင်းပေါက်၏နေရာချထားခြင်းနှင့်အသွင်အပြင်ကိုထိန်းချုပ်သောပဟေtheိ၏အပိုင်းအစဖြစ်ပါတယ်။ ထိုလိုအပ်သည် X ၀ င်းဒိုး အလုပ်လုပ်ရန်ပေမယ့်မရ Desktop ပတ် ၀ န်းကျင်, တာဝန်ပုံစံ။ နှင့်အညီ ArchLinux တရားဝင်ဝီကီ, «မှဆက်ကပ်အပ်နှံ၎င်း၏အပိုင်းအတွက်Windows မန်နေဂျာများ«၊ ဤအမျိုးအစားသုံးမျိုးခွဲခြားထားသည်။
Stacking: ထို့ကြောင့် Windows နှင့် OS X ၏ပုံပန်းသဏ္andာန်နှင့်လုပ်ဆောင်မှုကိုတုပသူများသည် desktop ပေါ်တွင်စာရွက်များကဲ့သို့သောပြတင်းပေါက်များကိုစီမံခန့်ခွဲကြသည်။ ၎င်းကိုတစ်ခုနှင့်တစ်ခုအပေါ်တွင်ထားနိုင်သည်။
ကြွေပြား: "mosaic" အမျိုးအစားများသည်ပြတင်းပေါက်များနှင့်ထပ်တူမတူသောနေရာများနှင့်များသောအားဖြင့်ကီးဘုတ်ဖြတ်လမ်းများကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အသုံးပြုခြင်းနှင့် mouse ကိုအသုံးပြုခြင်းအပေါ်မှီခိုမှုနည်းပါးခြင်းတို့ဖြစ်သည်။
ဒိုင်းနမစ် သင့်အားကြွေပြားများ (သို့) floating များအကြားပြတင်းပေါက်ပုံစံဒီဇိုင်းကိုပြောင်းလဲရန်ခွင့်ပြုသူများ။
Desktop ပတ် ၀ န်းကျင်
၎င်းသည်ဒြပ်ထုတစ်ခုသို့မဟုတ်စနစ်တစ်ခုထက် ပို၍ ပေါင်းစည်းသည် Window Manager။ ထို့ကြောင့်နှစ် ဦး စလုံးလိုအပ်သည် X ၀ င်းဒိုး ကဲ့သို့ Window Managerအလုပ်။ အများအားဖြင့်၎င်းတို့တွင်ကိုယ်ပိုင်များပါဝင်ပြီး / သို့မဟုတ်အကောင်းဆုံးအလုပ်လုပ်ရန်တစ်ခုသို့မဟုတ်တစ်ခုထက်ပိုသောလွတ်လပ်သော WM များကိုအသုံးပြုခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။
ထို့အပြင်၎င်းကိုမှတ်သားရန်အရေးကြီးသည် Desktop ပတ် ၀ န်းကျင် ယေဘုယျအားဖြင့်အသုံးချပရိုဂရမ်များအားလုံးသည်တစ်ခုနှင့်တစ်ခုသိနိုင်သောအမျိုးအစားတစ်ခုအပလီကေးရှင်းတစ်ခုအနေဖြင့်တင်းတင်းကျပ်ကျပ်ပေါင်းစည်းထားသည့်အစုများပါဝင်သည် panel (taskbar) ထိုကဲ့သို့သောအသေးစားအားမရအဖြစ်အချို့သောစစ်ဆင်ရေးလွယ်ကူချောမွေ့ ဒြပ်စင်များ (ဝစ်ဂျက်များ) အသုံးပြုသူအတွေ့အကြုံတိုးတက်စေရန်အမြန်အရေးယူမှုသို့မဟုတ်သတင်းအချက်အလက်သည်။
အမှု၌, သင်အကြောင်းပိုမိုသိလို Desktop ပတ် ၀ န်းကျင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အောက်ပါယခင်ရရှိနိုင်သော entries တွေကိုလေ့လာရန်အကြံပြုပါသည်။
Desktop Environments နှင့်နှိုင်းယှဉ်။ Window မန်နေဂျာများ
သီးခြား Desktop Environment တစ်ခုနှင့်သက်ဆိုင်သည်
Metacity: GNOME မှဖြစ်သည်
ပြောတတ်: GNOME Shell မှ
Kwin: KDE နှင့် KDE Plasma မှ
XFWM: XFCE မှ
အချစ်: Deepin မှ
Gala: Pantheon မှဖြစ်သည်
မင်္ဂလာပါ: Budgie မှ
ယူကေ: UKUI မှ
သတ်သတ်မှတ်မှတ် Desktop ပတ်ဝန်းကျင်၏လွတ်လပ်သော
၉ မမ https://github.com/9wm/9wm
Window ပြုလုပ်သူ: https://www.windowmaker.org/
ငါတို့မျှော်လင့်ပါတယ် "အကူအညီအနည်းငယ်သာပို့စ်" အကြောင်း «Gestores de Ventanas», အတွင်း၌သို့မဟုတ်အပြင်ဘက်တွင်အသုံးပြုလက်ရှိ «Entorno de Escritorio»ဆိုလိုသည်မှာ၎င်းတစ်ခုမှမှီခိုခြင်း (သို့) အမှီအခိုကင်းခြင်းတစ်ခုလုံးအတွက်အလွန်ကြီးစွာသောအကျိုးစီးပွားနှင့်အသုံးဝင်သည် «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» နှင့်၏အံ့သြစရာ, အလွန်ကြီးမားသောနှင့်ကြီးထွားလာ၏ applications များ၏ဂေဟစနစ်၏ပျံ့နှံ့ဖို့ကြီးစွာသောအလှူငွေ၏ «GNU/Linux».
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » applications များ » Window Managers - GNU / Linux အတွက် Graphical User Interfaces
Juvenal Salinas Maldonado ဟုသူကပြောသည်
စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့သတင်းအချက်အလက်။ ငါအချို့ဝင်းဒိုးမန်နေဂျာများအကြောင်းကိုကြားခဲ့ပေမယ့်သင်ပေးစာရင်းအမှန်တကယ်အထင်ကြီးဖြစ်ပါတယ် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
juvenal salinas maldonado အားပြန်ကြားပါ
မင်္ဂလာပါ, Juvenal ။ မှတ်ချက်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် သတင်းအချက်အလက်များကိုသင်ကြိုက်နှစ်သက်။ ၎င်းသည်အသုံးဝင်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့ဝမ်းမြောက်ပါသည်။
Jonathan System Engineer ဟုသူကပြောသည်
mate သည် desktop ပတ် ၀ န်းကျင်ကောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်၏ laptop ဟောင်းနှင့် desktop ကွန်ပျူတာနှစ်ခုလုံးအတွက်မယုံနိုင်လောက်အောင်တွေ့ခဲ့ရပြီ။ ငါ၏ဟောင်းနွမ်းသော laptop တွင်ပုံမှန် ubuntu ကိုအသုံးပြုသည်။ ၎င်းသည် processor ၏ ၆-၇% ကိုသုံးစွဲသည်။ Ubuntu mate တွင် ၁-၂ စားသုံးသည်။ Processor ၏% သည်စားသုံးမှုနည်းသည်။ ကျွန်ုပ်၏ desktop pc တွင်ပုံမှန် ubuntu သည်ပရိုဆက်ဆာ၏ 6-7% ကိုစားသုံးသည်။ Ubuntu mate တွင်၎င်းသည် processor ၏ 1-2% ကိုစားသုံးသည်၊ စကားလုံးအနည်းငယ်ဖြင့် mate environment နှင့် ubuntu သည် cpu လျော့နည်းသည်။ ကျွန်တော့်လက်ပ်တော့ပ် ၂၀၁၂2မှာ ryze3desktop pc လိုမျိုး။
Jonathan System Engineer ကိုပြန်သွားပါ
Bryan Vicente Urquiza ဟုသူကပြောသည်
သင်မှန်ပါသည်၊ စားသုံးမှုနိမ့်ပြီး၎င်းသည်လျှောက်လွှာများကိုမြန်ဆန်စွာဖွင့်နိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်တစ်ပတ်အသုံးပြုပြီး၎င်းသည်ဤကဲ့သို့သောဆက်လက်ပြုလုပ်ရန်မျှော်လင့်ပါသည်
Bryan Vicente Urquiza အားပြန်ပြောပါ
အဲလစ်ဇဘက် montana ဟုသူကပြောသည်
ငါသည် mate အတွက်စိတ်လှုပ်ရှားမိသည်၊ ၎င်းသည်အခြားပတ်ဝန်းကျင်များကဲ့သို့စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်မှုမရှိသော်လည်း၎င်းသည်ကျွန်ုပ်လိုအပ်သောအရာများ၊ အခြေခံရိုးရှင်းသောစိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်မှုများကိုပြုလုပ်ပေးသည်၊ သို့သော် application များဖွင့်သောအခါမြန်ဆန်သောနှုန်းဖြင့်လဲလှယ်ခြင်း၊ ပရိုဆက်ဆာသုံးစွဲမှုနည်းပြီး၊ သိုသိပ်သည်းမှတ်ဉာဏ်ရှိသော်လည်း၊ သိုလှောင်မှုပမာဏမှာ ၈ ဂစ်ဂါဘစ်ရှိကြောင်းကိုကျွန်ုပ်မစိုးရိမ်ပါ၊ သို့သော်၎င်း၏ပရိုဆက်ဆာသုံးစွဲမှုနိမ့်ကျမှုကကျွန်ုပ်ကိုချစ်မြတ်နိုးစေပြီး ၀.၅% အနားယူသည်၊ ကျွန်ုပ်သည်အခြားပတ်ဝန်းကျင်များကိုကြိုးစားပြီး ၃-၄% အထိရောက်ရှိသည်။ gnome shell နှင့် kde plasma သည် ၂-၃% သို့ရောက်သည်နှင့်အမျှအိမ်ထောင်ဖက်မှာ ၀.၅% ထက်နိမ့်သည်။ WOWOWOWOWOWOW, ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်၏အဓိက desktop pc တွင် ၈ လကျော်စမ်းသပ်ခဲ့ပြီး၎င်းသည်ကျွန်ုပ်ကိုကျွမ်းကျင်စွာပြproblemsနာမရှိခဲ့ပါ၊ ကျွန်ုပ် YouTube ၌ဗွီဒီယိုများကြည့်သည် ၎င်းသည်အံ့သြစရာကောင်းသည်။ ကျွန်ုပ်မသိပါ။ ၎င်းသည်အားလုံးဖြစ်သင့်သည်အတိုင်းအရည်သည် gnome ၌မှီဝဲပြီး kde plasma အတွက်တူညီသည်။
Elizabeth montana အားပြန်ပြောပါ
Mario trivia ဟုသူကပြောသည်
Mate ဟာမြန်တယ်။ ပတ်ဝန်းကျင်ကိုအခြေခံအသွင်အပြင်နဲ့ပြောင်းလဲလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တစ်ခါမှမစဉ်းစားခဲ့ဘူး၊ အဲဒါကဘယ်လောက်မြန်တယ်၊ ငါ google chrome ကိုဖွင့်လိုက်တာနဲ့ ၁ စက္ကန့်လောက်မှာပဲမြန်မြန်ဖွင့်လိုက်တယ်၊ ငါသည်ငါ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်အသုံးပြုသည်။
MATE DESKTOP ပတ် ၀ န်းကျင်သည်အထင်ကြီးစရာကောင်းပြီးအရာအားလုံးတည်ငြိမ်ပြီးကျွန်ုပ်၌ပြproblemsနာမရှိပါ။ ၎င်းသည်လျင်မြန်စွာကလစ် နှိပ်၍ သင်၏လျှောက်လွှာကိုဖွင့်ထားပြီးဖြစ်သည်။ မကြိုးစားသူများအတွက်၎င်းကိုလုပ်ပါကထိုက်တန်သည်။
Jean Carlos Granda ကိုပြန်ပြောပါ
Francisco Diaz ဟုသူကပြောသည်
ငါပတ်ဝန်းကျင်တွင်အပင်မှလှုံ့ဆော်မှုခံရသောကြောင့်ပတ်ဝန်းကျင်တွင်ရှိသည့်အစိမ်းရောင်အရောင်ကိုငါကြိုက်သည်၊ ကျွန်ုပ်သည်ဤပတ်ဝန်းကျင်ကိုကျွန်ုပ်၏ ryzen7desktop pc မှ ၃ နှစ်ကြာယူထားသည်။ ၎င်းသည်အလွန်မြန်သည်ဟုယုံကြည်သည်၊ ၎င်း၏ CPU သုံးစွဲမှုနည်းပါးသည်။ ကျွန်ုပ်တွင်အခြားပတ်ဝန်းကျင်နှင့် ပတ်သက်၍ ပြproblemsနာများရှိခဲ့သော်လည်း ၂၀၁၃ ခုနှစ်မှစ၍ Ubuntu ကိုအသုံးပြုခဲ့ပြီး ၂၀၁၈ မှစတင်၍ အဓိကအဓိကအဖြစ်၎င်းကို ၂၀၁၈ မှစတင်၍ အသုံးပြုခဲ့ခြင်းကြောင့်ဝမ်းသာမိပါသည်။
Francisco Diaz ကိုပြန်သွားပါ
ငါ SPORING DE MATE နှင့်အတူ Fedora ကိုသုံးနေပါတယ်။ အစမှာပြproblemsနာရှိခဲ့ရင်ဖြေရှင်းပြီးပြီ။ အခုထိကောင်းမွန်နေပါတယ်၊ ဒီပတ်ဝန်းကျင်ကအရမ်းမြန်လွန်းတယ်။
abraham vizcarra ဟုသူကပြောသည်
ငါ ၇ လကြာအောင်ဆက်သုံးတယ်။ ဒါကငါ့ကိုလိုအပ်တာအတွက်ရလဒ်ကောင်းတွေပေးတယ်။
abraham vizcarra သို့ပြန်သွားရန်
Alejandro Rodriguez ဟုသူကပြောသည်
ဒီပတ် ၀ န်းကျင်အတွက် kde plasma ထားခဲ့ပါ၊ ကျွန်ုပ်သည်၎င်းကိုကျွန်ုပ်၏ debian တွင်အသုံးပြုပြီးကျွန်ုပ် ထပ်မံ၍ မတောင်းဆိုပါ။
Alejandro Rodriguez အားပြန်ပြောပါ
Leonardo Garcia ဟုသူကပြောသည်
Ubuntu mate ကို install လုပ်မယ်၊
leonardo garcia သို့စာပြန်ပါ
Ubuntu mate ရှိရင် system ကို update လုပ်ဖို့ အကယ်၍ သင် updates တွေကိုရပြီဆိုရင်သင် "software update" ကိုသွားပြီးအဲ့ဒီ့ကိုရှာပြီးသင်ပြီးသွားတဲ့အခါသင် system ကို restart လုပ်ပါ။
Foreshadow တိုက်ခိုက်မှုအသစ်တစ်ခုသည် Intel, AMD, IBM နှင့် ARM ပရိုဆက်ဆာများအပေါ်သက်ရောက်မှုရှိသည်
UKUI - GTK နှင့် Qt တို့ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောပေါ့ပါးသည့် Linux Desktop Environment